पढाउन छाडेर कुशेका दुइ शिक्षक कांग्रेसको कार्यक्रममा – Vision Khabar
Loading... आजः बिहिबार, असार २५, २०७७
पढाउन छाडेर कुशेका दुइ शिक्षक कांग्रेसको कार्यक्रममा
। २३ पुष २०७६, बुधबार ११:५७ मा प्रकाशित
जाजरकोट । कांग्रेसले कुशे गाउँपालिकाको घरंगामा गरेको कार्यक्रममा शिक्षकहरु विद्यालयमा पढाउन छाडेर पार्टी प्रवेशमा गएको पाइएको छ । लक्ष्मी प्राप्ति मावि खुर्पाका प्रधानाध्यापक दिनेशकुमार सिंह विद्यालयमा पढाउन छाडेर कांग्रेस कुशे गाउँ कमिटिले घरंगामा गरेको सभामा पार्टी प्रवेश गरी विद्यालयमा पढाउन नगएको पाईएको हो ।
शिक्षक सिंह लामो समय सम्म राप्रपाको शिक्षक संगठनमा आवद्ध थिए । कांग्रेस जाजरकोटका यूवा नेता वेदराज सिंहले फेसवुकमा पोष्ट गरेको स्टाटसमा दिनेश सिंहको नामनै राखेको पाइएको छ ।
अंकमाल गरेको तस्वीर समेत नेता सिंहले सार्वजानिक गरेका छन् । त्यस्तै सो कार्यक्रममा बीरेन्द्र एश्वर्य मावि लिम्साका शिक्षक कालीप्रसाद थापाले माईक्रोफोन समातेर पार्टी प्रवेशको लिष्ट बाचन गरेको स्पष्ठ देखिन्छ ।
यसरी बिद्यालयमा पढाउन छोडेर पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुने शिक्षकबाट कस्तो प्रकारको शिक्षाको अपेक्षा गर्न सकिएला ? शिक्षा क्षेत्रमा चर्को राजनीति भएमा उहाँहरुले पढाउने विद्यालयमा अध्यायन गर्ने विद्यार्थीहरुमा खस्तो छाप पर्छ होला । शिक्षकले पार्टी प्रवेश गर्दै गरेको देख्ने विद्यार्थीको मनमा कस्तो खालको राजनीतिक संस्कार सिक्छ होला ? यो अहिलेको ज्वालन्त प्रश्न हो ? यो भन्दा अघि पनि यस्ता खालका घटना नभएका भने होईनन, तर देशमा चिरस्थात्व भई सकेको अवस्थामा पनि यस्ता खालका राजनीतिक गतिविधिले पक्कै पनि शैक्षिक क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव पदैन होला ?
भेरी नगरको बजेट ६८ करोड ५ लाख ५८ हजार ८ सय
भुसको आगोझै सल्किरहेछ जातिय विभेद
कर्णालीमा ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट, कोरोना कोषलाई एक अर्ब
सुर्खेत गुर्भाकोटको क्वारेन्टाइन्मा एकजनाको मृत्यु
नयाँ नक्सा अनुमोदनको खुसीमा जाजरकाेटमा दीप प्रज्ज्वलन